Mareykanka oo xayiraado ugu hanjabay Madaxda Somaliya | Dhacdo
Home Wararka Maanta Mareykanka oo xayiraado ugu hanjabay Madaxda Somaliya
Mareykanka oo xayiraado ugu hanjabay Madaxda Somaliya
Dowladda Mareykanka ayaa Madaxda Dowladda Somaliya iyo kuwa Dowlad Goboleedyada ugu baaqday inay u hoggaansamaan habraacyada lagu dardargelinayo hannaanka doorashooyinka ee dalka.
Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka, Ned Price ayaa Madaxda Soomaalida ugu baaqay inay raacaan waqtiga doorashada ee lagu heshiiyay iyo hannaanka lagu saxayo khaladaadkii habraacyada doorashada.
Afhayeenka ayaa sheegay inay muhiim tahay in doorashada lagu soo geba-gabeeyo waqtigii lagu heshiiyay, loona hoggaansamo qodobadii ka soo baxay Shirka Golaha Wadatashiga Qaran, ee 9-kii bishan lagu soo geba-gabeeyay Magaalada Muqdisho.
“Mareykanku waxa uu hoosta ka xariiqayaa in go’aankii 9-kii bishii January, ee ay qaateen Golaha Wadatashiga Qaranka ee ahaa in doorashada waqtigeeda ka dib dhacday ee Baarlamaanka, lagu soo geba-gabeeyo 25-ka bisha February ee sanadkan.” Ayuu yiri Afhayeenku.
Afhayeenka ayaa yiri “Waxaan dhammaan ugu baaqaynaa hoggaamiye-yaasha, haddii ay ahaan lahaayeen Heer Qaran iyo Heer Maamul Goboleed inay u hoggaansamaan habraaca cusub ee lagu heshiiyay, ayna saxaan khaladaadka dhanka habraaca ee hareeyay doorashada.”
Dhanka kale Ned Price, Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Mareykanka ayaa sheegay in Mareykanku uu xayiraado ku soo roggi doono, ciddii fulin weydo heshiiskaasi.
“Doorashada Somaliya muddo sanad ah ayay dib uga dhacday xilligii loogu talagalay. 8-da bisha February waxa ay ku beegan tahay muddo sanad ah, markii uu dhammaaday muddo xileedka Madaxweynaha. Mareykanku waxa uu diyaar u yahay inuu qaado tallaabooyinka lagama maarmaanka ah, oo ay ka mid tahay xanibaado dhanka fiisaha ah, taasi oo jawaab u ah, haddii doorashada ay dib u dhacdo ama ay dhacaan tallaabooyin lagu wiiqayo hufnaanta geeddi-socodka.” Ayuu yiri Ned Price.
Previous articleNin arday ahaa oo dil iyo dhacba loogu gaystay Magaalada Muqdisho
Next articleGuddiga Doorashada Galmudug oo beeniyay in xilka laga qaaday Gudoomiyihii Guddiga